02/06/2018 - Page 3 sur 4 -
Fifamindram-pibaikoana tany Toliara : Nitarika ny lanonana ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka
Nizotra am-pilaminana heni-kaja sy heni-boninahitra ny fifandimbiasan-toerana ampahibemaso natao tany Toliara. Notontosaina omaly antoandro tany an-toerana mantsy ny lanonana lehibe ara-miaramila, izay niompana tanteraka tamin’ny famindram-pibaikoana arak’asa. Izany lanonana izany dia notronon’ireo manam-boninahitra, izay notarihin’ny …Tohiny
Sabotsy Namehana : Efa manomboka ny didim-poitra faobe
Fomba malagasy efa fanao isan-taona amin’ny vaninandro ririnina toa izao ny famoran-jaza. Misy araka izany ny fikambanana antsoina hoe avotr’aina izay mandray an-tanana manokana ny fikarakarana ny didim-poitra faobe. Izay notanterahina tao amin’ny toeram-pitsaboana CSBII …Tohiny
Sakafo azo antoka sy ara-kalitao : Antoka ho an’ny fahasalamana
“Sakafo azo antoka sy ara-kalitao, andraikitry ny rehetra”, io ny lohahevitra nandritra ny fankalazana ny androm-pirenena ho an’ny fampiroboroboana ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao tany Antsirabe, faritra Vakinankaratra omaly. Nivoitra nandritra ny fankalazana …Tohiny
Mpiasa sasantsasany ao amin’ny Jirama : Manao takalon’aina ny orinasam-bahoaka
Misy fiantraikany betsaka eo anivon’ny orinasa Jirama sy mamoha fahasahiranana hafa indray ny fitokonana ataon’ny mpiasa. Fantatra mantsy amin’izao fa noho ny fitokonana volen’ny mpiasan’ny Jirama, izay miompana amin’ny tombontsoan’olom-bitsy, izao mampikatso ny asa rehetra …Tohiny